Faa Faahin: Banaanbax ka dhacay Jowhar | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Faa Faahin: Banaanbax ka dhacay Jowhar
Qaar kamid ah Shacabka ku nool Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hir-Shabeelle ayaa goordhow waxaa ay Magaaladaasi ka bilaabeen banaanbax ka dhan ah Ciidamada Booliska hir-Shabelle ee ka howlgalla Magaalada Jowhart.
Banaabaxa ayaa looga soo horjeeda Howlgallo ay saaka Ciidamada Booliska ka sameeyeen xaafado ka tirsan Magaaladaas,isla markaan ay kusoo qab qabteen dad kor u dhaafaya ilaa 100 Ruux, kuwaas oo dhalinyaro u badan.
Dhalinyaradaan ayaa loo soo qab qabtay Qaraxii Bambo ee lagu dilay Guddoomiye kuxigeenkii Amniga Gobolka Shabellaha dhexe Muxumed Dugaal iyo Wiilkiisa,xilli bamka lagu weeraray Gurigooda oo ku yaalla xaafada Hanti-Wadaag.
Dadka ay ka xeran yihiin Ehaladooda iyo carururtooda ayaa muujinaya Bananbaxyo ay kaga soo horjeedaan dadka ay Ciiidamada Booliska Hir-Shabelle xireen,waxaana wararka aan heleyno ay sheegayaan in Ciidamada ay dadka banaanbaxayaasha ah ay ku ridayaan rasaas farabadan.
Previous articlePuntland oo faah faahisay kiiska loo haysto Siyaasi Muuse Cali Jaamac
Next articleMaxaad kala socotaa sababta Farmaajo iyo Khayre uga baaqdeen Baroordiiqda Musiibadii Soobe